အာလူးနဲ့ stewed Zucchini,
Stewed zucchini နဲ့အာလူး - ချွင်းချက်မပါဘဲ, လူအပေါင်းတို့အားအယူခံ, သင်၏နေ့စဉ်စားပွဲမျိုးစုံလိမ့်မည်ဟုချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်အရသာရှိတဲ့ဟင်း။
အာလူး -4PCs; ။
ချိုမြိန်ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း - 1 pc; ။
zucchini - 400 ဂရမ်;
ခရမ်းချဉ်သီး -3PCs; ။
မုန့် - 150 ml ကို;
နံ့သာမျိုးကို - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
ပွင့်လင်းသည်အထိဟင်းသီးဟင်းရွက်ထောပတ်နဲ့ကြော်နှင့်အတူပြီနောက်ဟင်းထဲမှာပြန့်နှံ့ Shinkuem ကြက်သွန်အန်စာတုံး။ တစ်ဦးကြမ်း grater အပေါ်မုန်လာဥနီပွတ်, ငရုတ်ကောင်း Cube သို့ဖြတ်ကြက်သွန်နီဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ Zucchini နဲ့အာလူးခွံကွာဖြတ် Cube သို့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ, သန့်ရှင်းနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်ရံဖန်ရံခါ 10 မိနစ်နှိုးဆော်သည်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်၏ကျန်မှကြော်သူတို့ကိုပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ပြီနောက်ဟင်းထဲမှာခရမ်းချဉ်သီး Add နှင့်မြည်းစမ်းဖို့ဒဏ်ငွေ-ဖြတ်ခွံကြက်သွန်ဖြူ, ဆား, ငရုတ်ကောင်းဖယ်ရှားပြီးနောက်။ ပူနွေးသောရေကို 50 ml အတွက်ရောလျက်မိနစ်ကြော်စုံတွဲ, cream ကိုငါသွန်းလောင်း, တစ်ဦးအဖုံးတွေနဲ့ဖုံးအုပ်နှင့် 15 မိနစ်နှေးမီးကိုကျော်မျှတည်ထားပါထို့နောက်ပြားပေါ်ပေါင်း zucchini ပြိုကွဲခြင်းနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဖြန်း။
ကြော် zucchini အာလူးနဲ့ stewed
zucchini - 1 ကီလိုဂရမ်;
ဘူဂေးရီးယားငရုတ်ကောင်း - 1 pc; ။
ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည် - 100 ml ကို;
ဇီယာစေ့ - တောင်းဆိုမှုကိုပေါ်မှာ။
Zucchini ဆေးကြောခြင်းနှင့်အသေးစား Cube သို့ခုတ်ဖြတ်။ strips တွေ clean နှင့် shinkuem မှအာလူးနဲ့ကြက်သွန်နီ။ မုန်လာဥကင်းစင်ပြီးကြမ်း grater အပေါ်ပွတ်ပေးပါ။ ထို့နောက်နက်ဒယ်အိုးထဲမှာ, ကြက်သွန်နီသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ကြော်, မီးရှို့ဟင်းသီးဟင်းရွက် maslitse, သွန်းလောင်း။ ထိုအခါမုန်လာဥနီ, အန်စာတုံးခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်းနှင့် add ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည် ။
ထိုအခါအချို့သောဆားထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်အာလူးနဲ့ zucchini ၌ရှိသမျှသောအလွှာကျလိမ့်မည်။ အားလုံးအလတ်စားအပူကျော် 40 မိနစ်မျှတည်ထားပါ။ ထို့နောက်ကြိုတင်ကုန်တယ်ဇီယာစေ့ကို add နှိုးဆော်နှင့်အခြားမိနစ် 20 မျှတည်ထားပါ။ တစ်ပန်းကန်ပေါ်လွန်စွပ်ပြုတ် zucchini ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဝတ်ပြုကြလော့။
multivarka အတွက်အာလူးနဲ့ stewed Zucchini,
zucchini -3PCs; ။
အာလူး - 300 ဂရမ်;
အနီရောင်ခရမ်းချဉ်သီး - 250 ဂရမ်;
ငရုတ်ကောင်း -2PCs; ။
နံ့သာမျိုးကို - ကိုမြည်းစမ်းရန်,
လတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက် - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
Multivarku ကွန်ယက်များတွင်ပါဝင်သည်။ ပန်းကန်လုံး၏အောက်ခြေတွင်နှင့် maslitse ဖျက်စီးရမဲ့ zucchini ထားကြ၏လောင်း, သူတို့ရဲ့နံ့သာ prisypaya ။ ထိပ်တန်းအန်စာတုံးအာလူး, paprika နှင့်ကြက်သွန်အလွှာတင်ကြ၏။ အားလုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ချပ်ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူဖုံးအုပ်ထားပါ။ ထို့နောက်ဆားနှင့်အတူဖြန်းဂျင်း, ဟင်း, နံနံခြင်းနှင့်ပင်စိမ်း၏အရသာကိုထည့်ပါ။ "သတ်" mode ကိုများနှင့်တစ်နာရီအကြောင်းကိုပြင်ဆင်နေဖော်ထုတ်။ ကောင်းပြီ, သောသူအပေါင်းတို့, ယ့် multivarka အတွက် braised အာလူး အဆင်သင့်! ပန်းကန်ပေါ်ထို့ပြင်အားလုံးရောနှောခြင်းနှင့်ပြန့်ပွား။
မီးဖို၌ပင်လယ်ပြင်ဘေ့စ - မီးဖုတ်ထားသောငါး၏အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
နာနတ်သီးနှင့်အတူကြက်သား - မီးဖုတ်ထားသော, ကင်ဟင်းလျာများနှင့်မုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
ဂန္ထဝင် shavermy ငံပြာရည် - စာရွက်
အဆိုပါ chanterelles ကြော်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သုပ် "Tiffany" - ကြော်
Cheesecakes - စာရွက်
ရေပေါ်မှာ crumbly ဂျုံယာဂုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Dumpling ဟင်းချို - စာရွက်
Britney Spears ဟောလိဝုဒ်အလှအပဆုပေးပွဲ-2018 ဧည့် ultrashort စားဆင်ယင်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့
မိန်းကလေးများအဘို့အ dumbbells နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း
က Natalia Vodianova ပထမဦးဆုံးသူ၏ဇနီး Antoine အာနို့ထ် Nizhny Novgorod သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ပြသ
လက်သည်းဒီဇိုင်း - ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2016
တိုင်းအရသာများအတွက်အဖြူရောင်ဝတ်စုံ - တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ရှည်လျားပြီးတရားဝင်သို့မဟုတ်နေ့တိုင်း